ရေးချင်နေတာပြောချင်နေတာကြာခဲ့ ပါပြီ။ ကျွန်တော်တခါမှ မြန်မာ ဘလောက်ဂါ လောကတိုးတက် ရေးတက် ကျမ်းတွေ မရေး ခဲ့ဘူးခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ဆွေးနွေး ရေးသားပါ တော့မယ်။ မနေ့ က ကိုရန်အောင်ရဲ့ ဘလောက် ရောက်တဲ့ အခါ မြန်မာစာ စာလုံးအသစ် အကြောင်းပြောထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ ကောင်းပါဒယ် ဒီအကြောင်း အကြံနည်းနည်း ပေးချင်လို့ပါ။
မြန်မာ စာလုံးကို ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်မနေ ထွင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဂါတွေ အေးအေး ဆေးဆေး မြန်မာစာ လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုမေ့ထားလို့ ရမှာပါ။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲ ကစီးပွားရေး သံသရာထဲ မှာအခကြေးငွေ မဆို့မပို့ ပေးရတာတွေရှိနေဦး မှာပါ။ သို့ကလို ရှိနေလဲကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ ဖြင့် အစိုးရ အားကိုးနဲ့ နင့်ကနဲတောင်း မယ့် အင်တာနက် လုပ်ငန်းတွေရှိ နေပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါမဖြစ်မနေ လုပ်သင့် ပါတယ်လို့ပထမ ဦးစွာထောက်ခံ တင်ပြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ ကိုညီလင်းဆက် ကြိုးစား နေသော်လဲ ကျွန်တော်တို့ အာရွှီးပြီး ဘာမှဝင်ကူတာ မရှိသေးပါဘူး။ အခုတော့လိုအပ်မယ် ထင်တာတွေကူ ညီပေးပါ့ မယ် လို့ဒီနေရာကနေ ကတိပေးပါတယ်။ အရမ်းလဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ပါ။ စာလုံးစနစ် တစ်ခုကို စတင်တီထွင် ဖို့က အပြောမှာ လွယ်သလောက် နောက်ကွယ် မှာခက်ခဲတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ တစ်ခုပြောချင် တာဒီတစ် ခါလုပ်တဲ့စာလုံးဟာ web မှာတင်မက computer system စနစ်တခု လုံးမှာပါ ပလက်ဖောင်း ဖြစ်မယ့် ကောင် ကိုလုပ် သင့်ပါတယ်။ ဒါကဆန္ဒပါ။ နောက်ပြီး IE မှာရော Firefox လို browser တွေမှာပလက်ဖောင်း ဖြစ်ဖို့ က ထင်သလောက်လွယ်မှာမဟုတ်သလို အချိန်အတော်ပေးရဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ ငွေအား လူအား။ စက်ပစ္စည်းနဲ့ နည်းပညာ အခက်အခဲတွေကို ကျွန်တော်တို့ ညီအကို မောင်နှမတွေ အင်နဲ့အားနဲ့ မဟုတ် တောင် တဆင့်ပြီး တဆင့် ကျော်လွှား နိုင်မယ်လို့ယုံ ကြည်နေပါတယ်။ တကယ့်ကို ပါရမီရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ထက် အင်မတန်တော်တဲ့ မြန်မာ ဘလောက်ဂါတွေ အများကြီးရှိနေ ပါတယ် သူတို့တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု့ကြောင့်ကျွန်တော် တိုရဲ့ Open Source မြန်မာ စာစနစ်အောင်မြင်မယ်လို့ ပြောရဲပါတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ်။ စာလုံးစနစ် သစ်အတွက် အမည်ပေးဖို့ပါ။ ဘယ်သူတွေ စပြောပြော စလုပ်လုပ် လူတွေသိအောင် စဖွတာ ကိုရန် လို့ခေါ်တဲ့ ချားဒါဝင်ရဲ့ ၁၀၀၈ ယောက် မျောက်တပည့် ကိုရောင်အန်ပါ။ ဒါကြောင့် အခုထွင်မယ့် စာလုံးအမည်ကို သူ့အမည်ပါအောင် ပေးသင့်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော် တို့သုံနေတဲ့ fount အမည်က ဇော်ဂျီ လေ။ ဇော်ဂျီ ဆိုတာ မြန်မာ့ ရိုးရာမှာ ထွက်ရာပေါက် နေတဲ့ သူလို့ သိကြပါတယ်။ ဒီလိုအမည်တွေဟာ မြန်မာ ပြည်သူတွေ အသိများ နေသမို့ ပေါက်ဖို့ရာ အင်မတန်လွယ်ကူနိုင် သလို မှတ်ရလဲ လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ စဉ်းစားတယ် ငါတို့လဲ ဒီလိုဘဲ ဘိုးတော်အမည်တွေဘဲ သုံးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ ။ ကိုရန်အောင် အမည်ပါတဲ့ ဘိုးတော်တွေဆိုရင် တော့ အောင်မင်းခေါင်၊ ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဦးအောင်ချမ်းသာ အဲဒီဟာတွေတော့ရှိတယ်။ ဒီတခါတော့ကို ညီလင်းဆက်ရယ် ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ။ ကိုရန်အောင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဒီစာလုံး ကို " ဘိုးဘိုးအောင် "
လို့ အမည်ပေးလိုက်ကြစို့လား ဟင်- - -။
ကိုဘလာဂေါက်ကြီးကတော့ဗျာ. ကြံကြံဖန်ဖန်လည်း ရေးတတ်ပါပေ့.
ဒီမှာ အူကိုနှိပ်နေရတယ်. ခွီးခွီးခွီး...